Fifehezana ny fakom-baovao : ny fomba nivadihan’ny lalàna momba ny fandisoana vaovao ho lasa fitaovana enti-manivana · Global Voices teny Malagasy
Fifehezana ny fakom-baovao : ny fomba nivadihan'ny lalàna momba ny fandisoana vaovao ho lasa fitaovana enti-manivana
Hampanginana fanoherana, betsaka ny governemanta mampiasa lalàna hanoherana ny fakom-baovao
Nandika (fr) i Dounia Latorre
Voadika ny 26 Avrily 2022 23:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Español, srpski, Français, English
Sary nahazoana alàlala am-pitiavana tamin'i Ameya Nagarajan
Herinandro monja taorian'ny nanombohan'ny fananiham-bohitry ny Rosiàna ao Okraina, nolanian'ny Douma (Parlemanta) ny lalàna iray manasazy ny fanelezana « fakom-baovao » momba ny hetsika ara-tafika misy amin'izao fotoana izao. Na iza na iza manaratsy ny tafika mitam-piadiana rosiàna ary mangataka fanasaziana dia hiharan'ny sazy mety ho tonga hatramin'ny 15 taona an-tranomaizina. Eto, ny filazàna hoe « fakom-baovao » dia mety hanondro izay rehetra fanehoankevitra mandeha mifanohitra amin'ny fanambaràna ôfisialy. Io lalàna io dia mihatra amin'ireo fikambanana, mpanao gazety matianina ary ny sivily izay mamoaka izao rehetra izao, na io lahatsoratra na famoahana ety anaty tambajotra sôsialy koa aza. Voakasik'izany ihany koa ireo olona maneho hevitra amin'ny alàlan'ny “Tia (Like)”. Iray andro monja no nilain'ny Douma nandinihany ilay lalàna, ny ampitso ilay izy dia nosoniavin'ny Filoha Vladimir Poutine.
Io hetsika fanivànana tsy mbola nisy toa azy io dia nohamarinina ho toy ny fanarahamaso ny fandisoana vaovao ; adihevitra mamaritra ny vanim-potoanan'ny fampahalalam-baovao. Sady misy ny mpanohana no misy ny mpanohitra ny fampiharana ireo fepetra momba ny fandisoana vaovao. Ny andraikitra no arangarangan'ireo mpanohana ho toy ny fitaovana tokana ahafahana manakana ny fanelezana vaovao diso, raha ireo mpanohitra indray manamafy fa hanohintohina ny fahalalahana maneho hevitra io.
Tamin'ny 2017, ny fanambaràna niarahana momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny « fakom-baovao », ny fandisoana vaovao ary ny fampielezankevitra novokarin'ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana isam-paritra, dia manosoka hevitra ny amin'ny hanafoanana ireo fandraràna ankapobeny sy ny fanaovana ho heloka bevava ny fanelezana vaovao miainga amin'ireo « hevitra manjavozavo sy tsy hita fototra, indrindra fa ireo vaovao diso ». Araka io fanambaràna io, tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny lalàna tahaka izany, raha ny fahalalahana maneho hevitra no resahana. Kanefa, ny fametrahana fanontaniana momba ny fahamarinana na tsia amin'ny vaovao iray dia mazàna miteraka olana ho an'ny demaokrasia sy ny filaminan'ny fanjakàna. Miatrika fanamby marobe ireo fanjakàna, fanamby manome aina ny fanelezana vaovao diso. Tafiditra anatin'izany ny ady amin'ny fanambaràna manala baràka, ny vaovao diso aely momba ny valanaretina COVID-19 ary ny akaiky indrindra dia ireo kabary feno fankahalàna mahakasika ireo fifidianana.
Na nisy aza fampitandreman'ny Firenena Mikambana, ny ankamaroan'ireo firenena dia mametraka fepetra hiadiana amin'ny fandisoana vaovao. Amin'ny ankapobeny dia valinkafatry ny fiarahamonina sivily, ireo mpanao lalàna ary ireo orinasa misehatra amin'ny teknôlôjia. Pays-Bas sy Nizerià, ohatra, dia nihetsika tamin'ny alàlan'ny fanombohana fampielezankevitra fanentanana ireo media. Tao Alemaina, ireo mpanome tolotra anaty tambajotra ihany koa, toy ireo sehatra tambajotra sôsialy, dia voatery niady nanohitra ny fandisoana vaovao, tamin'ny fanesorana tao anatin'ny 24 ora ireo votoaty heverina ho manohintohina sy « mivandravandra be hoe tsy ara-dalàna ». Ny Antenimeram-pirenena frantsay dia nankato volavolan-dalàna roa natao hampihenàna ny fandisoana vaovao mahakasika ny fifidianana. Izy ireny dia hahafahan'ireo antoko pôlitika sy ireo mpirotsaka hofidiana manomboka fanenjehana malaky eny amin'ny fitsaràna raha sanatria misy manely vaovao diso ho hitan'ny daholobe. Nolavin'ny governemanta britanika aloha ilay fomba filaza hoe « fakom-baovao » ary noraisiny ireo fepetra ilaina handrisihana ireo orinasa mpanome tolotra tambajotra sôsialy mba hitandrina amin'ny fahamarinan'ny zavatra avoaka. Na izany aza, ho andrana hiadiana amin'ny fandisoana vaovao aely momba ny COVID-19, misy volavolan-dalàna iray novolavolaina momba ny fiarovana an-tambajotra, manery ireo sehatra ety anaty tambajotra handray « andraikitra amim-pahazotoana », isan'izany ny andraikitra amin'ny fanesorana ireo votoaty an-tserasera alohan'ny hanimban'izay ireny ny mpampiasa azy.
Ireny tranga ireny dia mifantoka indrindra indrindra amin'ny fandrindràna ireo dingana fitantanana votoaty, ahafahan'ireo andrim-panjakana mandray fepetra amina tranga voatsonga manokana. Kanefa, voakiana izy ireny noho ny fahafahany manome vahana ny sivana. Tsy mbola misy foana ny marimaritra iraisan'ny rehetra momba ny fanarahamaso ny fandisoana vaovao. Mbola loharanon'adihevitra ihany ny famaritana ireo votoaty manohintohina na tsy araka ny lalàna. Ambonin'izay, any amin'ny firenena sasany, lasa fitaovana fanarahamaso, fampanginana sy fiadiana amin'ny mpanohitra, ampiasain'ireo mpanolotra volavolan-dalàna ny hoe “fakom-baovao” sy “fandisoana vaovao”.
Rehefa hita ao anatin'ny lalàna iray ny fahafahana manao fanenjehana eny amin'ny fitsaràna, zavadehibe ny hamaritana mazava ny vaovao marina sy diso. Izany no tranga misy any amin'ireo fitondràna pôlitika marobe izay ny olany dia ny andraikitra manoloana ny lalàna noho ny fandisoana vaovao. Ao Myanmar, ny fanelezana an-tambajotra « ireo fakom-baovao sy ny fandisoana vaovao » ho entina « manala baràka, hampisamantsamaka fikambanana, hanairana ny vahoaka na hanimbàna ny fahatokisan'ny vahoaka » dia azo saziana famonjàna hatramin'ny 3 taona. Lasibatr'ilay lalàna ny mpanao gazety sy ny tambajotra sôsialy. Ampiharin'i Ejipta hatramin'ny 2016 ireo faneriterena henjana atao amin'ny media sy ny tambajotra sôsialy. Kendren'io fepetra ara-pitsaràna noho ny « famoahana vaovao diso » sy « fampiasàna tafahoatra ny tambajotra sôsialy » io ireo media sy ireo kaonty media sôsialy malaza. Ireo izay mamoaka voatoaty tsaraina ho « manafintohina » dia hahazo filazàna fandoavana sazy ara-bola na fampidirana am-ponja.
Any Rosia, vitan'ny lalàna momba ny « fakom-baovao » ny nanadio ny kianjan'ny media rosiàna amin'ny fanadihadiana malalaka sy ireo fomba famaky hafa ny tranga misy ao Okraina. Lasa hetsika mazava ho fanampenam-bava ny media sy ny vahoaka ilay izy. Ny hetsika hafa nataon'ilay mpanaramaso tany ampiandohan'iny herinandro iny dia nahitàna ny fandidiana ireo media rehetra hanaisotra ireo votoaty milaza ny fidirana ara-tafika ao Okraina ho “ady” ary hibahana ny fidirana amin'ireo media tsy miankina sasantsasany sisa tavela ao Rosia. Mitovy amin'ny an'ireo tranga izay nampiharana ny sivana noho ny ady tao amin'ny firenena ny fiantraikan'ilay fandaniana nalaky be an'ilay lalàna. Tsy ampy herinandro akory, tsy azon'ireo Rosiàna natao ny niditra tamin'ireo gazety mahaleotena, ny zo hifampiresaka ary ny hiresaka imasom-bahoaka ireo tranga misy.
Fanampin'izany, manana tolodalàna iray hafa mbola eo an-dalam-pandinihana ny Douma, izay ahafahan'ny mpampanoa lalàna manana fahafahana midadasika be amin'ny angondrakitra manokan'ny olona ao Rosia. Ananan'ny minisitera zo ny hikirakira ny angondrakitra manokan'ny olona, « tsy nalaina fotsiny mifanaraka amin'ny fanarahamaso ataon'ny fampanoavana, fa koa ao anatin'ny fampiharana fahefana hafa ». Raha lazaina amin'ny teny hafa, manalehibe ny kianjan'ny fitakiana angondrakitra manokan'ny olona ilay izy, izay mety hidiran'ny fomba fijery pôlitikan'ny isam-batan'olona.
Tany amin'ny faramparan'ny Martsa, nitarin'ny Douma ilay lalàna momba ny fakom-baovao mba hametrahana ny andraikitra ara-pitantanana sy araka ny lalàna amin'ny resaka fanelezana vaovao diso momba ireo tafika, sy koa momba ireo rantsam-panjakana rehetra miasa any ivelany. Voarakotr'izany ny asan'ireo masoivoho, ny an'ireo mpampanoa alalàna, ireo kaomity mpanadihady ary ny an'ireo andrim-panjakana hafa. Raha milaza ny mpanao lalàna fa ilaina ny fepetra tahaka izany mba hiarovana ny sary imasom-bahoaka ananan'ireo « mpiaro ny firenena », tsy azo ihodivirana fa hamafisin'ny lalàna tahaka izany ny faneren'ny sivana. Hatramin'ny naha-nanan-kery an'ilay lalàna, raha kely indrindra dia fito ireo trangana heloka bevava hita ary marobe ireo lamandy ara-pintantana nampiharina noho ireo fihetsiketsehana an'arabe sy teny anaty lahatsoratra an-tambajotra sôsialy.
Anatin'ireo tranga telo rehetra ireo, avadiky ny governemanta ho rariny ilay fanaovana lalàna mba ho toy ny fomba entina miaro ny olom-pirenen-dry zareo. Ankoatra izany, amin'ny ankapobeny ny lalàna tahaka izany dia lalàna manana endrika fanambaràna ary manome toerana ny fandikàna midadasika an'ireo fomba filaza nampiasaina. Toy ny any amin'ireo firenena hafa, miara-dàlana ireo lalàna momba ny fandisoana vaovao sy ny fahafahan'ny fanjakàna manao ny fanivànana ary ny familiana làlana malaky ny vaovao ety anaty aterineto. Rehefa atambatra, miteraka fahabangàna amin'ny fampahalalam-baovao ho an'ny olompirenena io, manome vahana ny fitomboan'ny tahotra sy ny tsy fahatokisana, ary manana ny herijika rehetra hanemporana izay feo mpanohitra rehetra.
Ny tranga ao Rosia dia mampiseho ny fomba ataon'ny fitondràna pôlitika ampiasàna ny fakom-baovao ho lasa fitaovam-piadiana hanafaizana izay rehetra mankahàtra ny hetsika ataon'ny governemanta. Mbola asehon'io indray koa ny ilàna mampandray andraikitra mba hamaritana ny fetra misy eo anelanelan'ny tena vaovao marina sy ny diso.
Raha mila vaovao misimisy kokoa, tsidiho ny pejin'ny tetikasa Unfreedom Monitor.
Podcast: Manitsy ny vokatry ny korontana ara-jeopolitika i Asia Afovoany
Azia Afovoany sy Kaokazy 3 herinandro izay
Mila manilika ny adiadiny ny Rosiana mpanohitra ka mivondrona manohitra ny ady
Okraina 25 Mey 2022
Media sy Fanoratan-gazety 23 Mey 2022